China sy ny orinasa mpanamboatra kompresy tsy misy lohany | Shuangyang
Anaran'ny vokatra: Φ2.4 Screw famatrarana tsy misy lohany
Fitaovana: Firaka titanium
• Hita amin'ny halavan'ny kofehy fohy sy lava ho an'ny fitsaboana ny famantarana marobe.
• 2.4mm Screws tsy misy loha tsy natao ho an'ny fametahana ratra intra-articular sy extra-articular ary tsy misy taolana kely sy sombin-taolana kely; arthrodeses ny tonon-taolana kely; bunionectomies sy osteotomies, ao anatin'izany ny scaphoid sy taolana carpal hafa, metacarpals, tarsals, metatarsals, patella, ulnar styloid, capitellum, radial head and radial styloid.
• Safidio ny bara firaka titanium vita amin'ny fanafody natokana ho azy, hahatratra ny hamafin'ny tendrony sy ny fahalalahana
• Ny latina manerantany cnc soisa sokajy izao tontolo izao, famolavolana milina indray mandeha
• Ny visy volo dia mampiasa teknolojia anodizing tsy manam-paharoa, afaka manatsara ny hamafin'ny atiny sy ny fanoherana mahery vaika
Φ0.9 Fanjaitra misy kofehy
Φ1.7 Bititra fandavahana medikaly
SW1.5 Sokiro hexagon azo namboarina
Anaran'ny vokatra: Rew2.7 Sokiro famoretana tsy misy loha
Hita amin'ny halavan'ny kofehy fohy sy lava ho an'ny fitsaboana ny famantarana marobe.
Φ1.9 Fandavahana drill fitsaboana
Anaran'ny vokatra: Φ3.0 Sokiro famoretana tsy misy loha
• 3.0mm Screws tsy misy loha tsy natao ho an'ny fametahana ratra intra-articular sy extra-articular ary tsy misy taolana kely sy sombin-taolana kely; arthrodeses ny tonon-taolana kely; bunionectomies sy osteotomies, ao anatin'izany ny scaphoid sy taolana carpal hafa, metacarpals, tarsals, metatarsals, patella, ulnar styloid, capitellum, radial head and radial styloid.
Φ1.1 Fanjaitra misy kofehy
Φ2.1 Fampianarana bitika fitsaboana
SW2.0 screwdriver hexagon azo namboarina
Anaran'ny vokatra: Rew3.5 Sokiro famoretana tsy misy loha
• 3.5mm Headless Compression Screws dia natao ho an'ny fametahana ratra intra-articular sy extra-articular ary tsy misy taolana kely sy sombin-taolana kely; arthrodeses ny tonon-taolana kely; bunionectomies sy osteotomies, ao anatin'izany ny scaphoid sy taolana carpal hafa, metacarpals, tarsals, metatarsals, patella, ulnar styloid, capitellum, radial head and radial styloid.
Φ2.5 Bititra fandavahana medaly voarindra
Anaran'ny vokatra: Φ4.0 Screw famatrarana tsy misy lohany
Φ1.5 Fanjaitra misy kofehy
Φ2.7 Bititra fandavahana medikaly
SW2.5 Sokiro havia hexagon
Ny Cannulated Screw System dia natao hanamboarana ny vaky, ny fusion ary ny osteotomies amin'ny taolana lehibe sy kely ary misy visy sy mpanasa lamba.
Ny tombony lehibe azo avy amin'ny visy vita amin'ny tafio-drivotra dia ny fampidirana azy ireo amin'ny tariby fitarihana na ny pin pin de guide. Ny savaivon'ny tsipika fitarihana dia kely kokoa noho ny visy namboarina ary azo apetraka tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fluoroscopy ao amin'ny efitrano fandidiana. Ho fanampin'izay, omena ny savaivony keliny, ny tsimok'aretin'ny torolàlana dia azo averina imbetsaka raha ilaina amin'ny fametrahana marina tsy misy fahasimbana loatra amin'ny taolana.
Miaraka amin'ny savaivony manomboka amin'ny ø2.4 ka hatramin'ny ø7.3, ny visy vita amin'ny tafio-drivotra dia manarona marika marobe ary manome fiononana ho an'ny mpandidy amin'ny halavan'ny kofehy isan-karazany izay mamela azy hisafidy ny tadin-tsolika mety ho an'ny vaky nomena.
Ny visy rehetra dia voatahiry ho an'ny fampiasana tariby tariby. Ny visy tsirairay dia misy kofehy amin'ny ampahany na tanteraka amin'ny alàlan'ny endrika nify manafoana. Ny visy vita amin'ny taolana vita am-bava dia matetika ampiasaina amin'ny valahana, valahana, lohalika, kitrokely ary tongotra. Vaky ny vozon'ny taolam-paty, fikorontanan'ny fiaraha-miasan'ny sacroiliac, lembalemba tibial ary valan-java-manelanelana femoridia, vakivaky kônaly, felam-baravarana talar, arthrodesis ankle, artalodesisan'ny subtalar, fivakisan'ny femur distal, ary fampiharana huméral, olecranon.
Ny visy dia alaina am-bifotsy mba hampiasaina amin'ny tariby mpitari-dalana ary ny visy tsirairay dia misy ampahany na feno kofehy amin'ny alàlan'ny endrika kofehy manafoana. Ny fanaingoana dia natao ho an'ny fampidirana vovobony bitika kely. Ny visy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy dia azo ampiasaina hanodinana ny sombin-taolana iray amin'ny iray hafa, izay ny sombin-taolana lavitra dia azon'ny kofehy visy ary sintomina mankamin'ny sombin-kortika eo akaikin'ny lohan'ilay visy. Ny visy vita amin'ny kofehy feno dia natao hampiasaina mba hampiorenana ireo vaky tsy misy faneriterena manerana ilay vaky.
Ny fiakaran'ny vidim-pahasalamana sy ny rafitra fandoavam-bola miaraka aminy dia mitarika safidy mora vidy toy ny visy alikaola. Amin'ny vaky tsy nafindra toerana, ny visy afaka manome valiny ara-pahasalamana mitovy amin'ny safidy lafo kokoa.
Natao izy io mba hampihenana ny fahasosorana amin'ny tavy malemy raha oharina amin'ny lohan'ny visy mahazatra.
Ny paosin-tsolika manamboatra tena dia natao hanamorana ny fampidirana ilay visy ary mety hanafoana ny filana fikolokoloana amin'ny tranga sasany.
Teo aloha: Screw vita amin'ny cannulated
Manaraka: Screw compression cannulated
Sokiro fanidiana orthopedic
Tady fanidiana ny taolana
Karazan-tsokosoko fanidiana taolana
Takelaka fanidiana Proximal Femur multi-axial
Takelaka fanidiana volar Dorsal
4.0 Takelaka mahitsy mihidy